Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Bahamas » Inona no Vaovao any The Bahamas amin'ny Oktobra
Travel Travel • Vaovao Mafana Bahamas • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Karaiba • culinary • Kolontsaina • Entertainment • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Music • Vaovao • Resorts • Tantaram-pitiavana tantaram-pitiavana tantaram-pitiavana • fiantsenana • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia
Fotoana famandrihana ity fialantsasatra fialantsasatra ity! Na aleonao miala sasatra eny amin'ny morontsiraka fotsifotsy na mitondra zotra fitetezam-boaloboka miaraka amin'ny traikefa nahafinaritra, dia faly ireo mpitsidika hiaina ny antony “Tsara kokoa any The Bahamas” miaraka amin'ireo trano malaza manerantany, nampisondrotra fiaramanidina mivantana ary manintona vaovao eo amin'ny faravodilanitra.
Ny Islands of the Bahamas dia nahazo fandresena marobe tamin'ny sokajy maro isan-karazany tao amin'ny Travel + Leisure izay “loka tsara indrindra eran-tany” nandrasana fatratra.
Nahazo fanolorana 20 ihany koa izy tamin'ny 2021 Karazan-tseza Mpizahatany Karaiba. Online.
Ny fifidianana an-tserasera amin'ny loka Caribbean Caribbean 'Choice Awards dia mikatona amin'ny 31 Oktobra 2021.
Mamirapiratra miaraka amin'ny fanekena malaza eran-tany i Bahamas - Ny nosy dia nitondra fandresena marobe tamin'ny sokajy isan-karazany tao Travel + fialam-boly andrasana fatratra isan-taona “Loka tsara indrindra eran-tany”Ary nahazo fanendrena 20 tamin'ny 2021 Loka momba ny safidin'ny mpivahiny Karaiba. Ny fifidianana an-tserasera amin'ny loka Caribbean Caribbean 'Choice Awards dia mikatona amin'ny 31 Oktobra 2021.
Tsiro ny SLS Baha Mar - Mpilalao mozika nahazo loka Grammy John Legend no hiaka-tsehatra ao amin'ny Tsiro ny SLS Baha Mar ny 5 Novambra 2021. Anisan'ny tapakila ny nahandro faran'izay mahafinaritra, ny «cocktails» namboarina ary ny vera LVE Rosé. Ny mpanatrika dia tokony 18 taona no ho miakatra.
United Airlines dia nanambara ny sidina azo alefa mankany Nassau - United Airlines nampiditra serivisy sabotsy tsy niato an'i Nassau avy ao amin'ny seranam-piaramanidina Iraisam-pirenen'i Cleveland Hopkins nanomboka ny 18 desambra 2021. Azo zahana ny sidina manomboka ny voalohan'ny volana septambra.
Ny rivodoza Hole Superyacht Marina ao amin'ny Paradise Landing dia misokatra indray amin'ny 2021 - Miaraka amin'ny vakim-paritra nitarina sy nametrahana ireo T-dock voalohany namboarina, Rivo-doza Hole Superyacht Marina miomana handray ireo mpitsidika tafaverina amin'ny vanim-potoana fitetezana ririnina 2022. Ny vahiny dia hankafy ny trano fonenan'ny dockside lafo vidy, ny antsinjarany eran-tany, ny fisakafoanana tsara ary ny kojakoja maro be.
Fitsangatsanganana miaraka amin'ny fahatokisana miaraka amin'ny fiantohana fialan-tsasatra amin'ny kapa - Manolotra ny Sandals Resorts International Fiantohana fialan-tsasatra amin'ny kapa. Ny vahiny ao amin'ny Sandals Royal Bahamian sy Emerald Bay dia afaka mahazo tombontsoa ao anatin'izany ny fialan-tsasatra fanoloana sy ny saram-pitaterana an'habakabaka, tsy misy fijanonana amina karantina sy fanafoanana maimaimpoana.
Fifanarahana mafana, Fomba fampandraisana anjara rehetra - Mandosira mankany amin'ny Nosy Grand Bahama ary mitahiry hatramin'ny 40% rehefa mijanona ao Lighte Pointe ao amin'ny Grand Lucayan Resort. Ny varavarankely dia izao hatramin'ny 31 Oktobra 2021.
Tazomy ny fahavaratra miaraka amin'ny fonosana tropikaly –Efa tonga ny fahalavoana, saingy mbola azonao atao ihany ny mitazona ny fahavaratra fahavaratra mandritra ny famandrihana fijanonana roa na telo alina ao Hilton ao amin'ny Resorts World Bimini. Tropic Packages manomboka amin'ny $ 508 isan'olona dia misy fitsangatsanganana an-dalambe amin'ny Tropic Ocean Airways avy any Fort Lauderdale. Ny varavarankelin'ny famandrihana dia hatramin'ny 31 desambra 2021 izao.
Mijanona kely kokoa ao amin'ny Baha Mar - Vahinin'ny Resort amin'ny Baha Mar mandray maimaim-poana ny alina fahefatra rehefa mamandrika fijanonana manerana ny portfolio amin'ny hotely misy ny Grand Hyatt, SLS ary Rosewood, miampy trosa $ 100, fidirana tsy misy fetra mankany Baha Bay ary fitsapana Rapid Antigen Rapid Antigen.
Afeno ny andro fanampiny - The Ocean Club, Resort Four Seasons, Bahamas dia manome ny vahiny alina fahefatra fanampiny ho an'ny vahiny isaky ny telo alina karama misesy, miaraka amin'ny fitaterana an-tseranana tsy miankina. Ny varavarankely dia izao hatramin'ny 31 desambra 2022.
Miaraka amin'ny nosy sy cay 700 mahery ary toerana itodiana 16 tsy manam-paharoa, Ny Bahamas 50 kilaometatra monja miala ny morontsirak'i Florida no misy azy, manome fialofana mora manidina izay mitondra ny mpandeha lavitra ny andavan'andro. Ny nosy Bahamas dia manana jono, antsitrika, sambo an-tsambo, fanaovana vorona, ary karazan-javaboary manerantany, kilometatra an'arivony maro amin'ny rano mahavariana indrindra eto an-tany sy ny morontsiraka madio miandry ny fianakaviana, mpivady ary mpitsangatsangana. Jereo ny nosy rehetra atolotra ao www.bahamas.com na ao amin'ny Facebook, YouTube or Instagram hahitanao hoe maninona no Tsara kokoa any The Bahamas.